စကားလုံးတွေ ကင်းမဲ့နေတဲ့ New Orleans မြို့ရဲ့ညနေခင်းတစ်ခုရဲ့မြစ်ရေပြင်ကို သူမနေတဲ့ Apartment ခန်းလေးကနေလှမ်းမြင်နေရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမကတော့ ထိုရှုခင်းလေးကို ခံစားဖို့စိတ်မဝင်စား။ ခရီးဆောင်အိတ်ထဲကို အဝတ်အစားတစ်ချို့ခပ်မြန်မြန်သွပ်ထည့်နေလေတယ်။ အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ ပေကြိုးနှစ်ကြိုးစ သုံးကြိုးစကို လှမ်းမြင်ရတော့ သူမသည် အဝတ်အထည်ချုပ်ခြင်း စသော Designer အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်သူ (သို့မဟုတ်) စိတ်ဝင်စား လေ့လာနေသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုသည်ကို ခန့်မှန်းနိုင်ပေတယ်။ ကဗျာကယာ ထုပ်ပိုးပြီး ခရီးဆောင်အိတ်ကို ဆွဲပြီး အခန်းထဲက ထွက်သွားတော့ စားပွဲပေါ်မှာ တင်ထားခဲ့တာက စေ့စပ်လက်စွပ် (သို့မဟုတ်) လက်ထပ်လက်စွပ် တစ်ကွင်းနဲ့အိမ်သော့တစ်ချောင်း …
ညက မှောင်သထက်မှောင်လာတယ်။ သူမတစ်ယောက်တည်း မောင်းနေတဲ့ကားဘီးလေးက Louisiana ရဲ့တောလမ်းကတ္တရာပေါ်မှာ။ ထိုစဉ် Phone call တစ်ခုဝင်လာတယ်။ (နာမည်က Ben တဲ့)။ သူမ ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ စကားကတော့ တစ်ခွန်းမှ မပြောဘူး။ သူမက ကားမောင်းနေတော့ Phone Speaker ထားတာကြောင့် Ben ဆိုတဲ့ ဟိုဘက်ကလူပြောတဲ့ စကားတွေကတော့ အတိုင်းသားကြားနေရတယ်။ “Michelle, please come back.” ထို့နောက်ဆက်ပြောတာက “Running away isn’t going to help anything.” တဲ့။ ချစ်သူရည်းစား ထွက်သွားတော့ ပြန်လာဖို့ကို Boyfriend လုပ်သူက သနားကြင်နာစွာနဲ့တောင်းဆိုနေဟန်ပါပဲ။ သူမ Phone ကို ချလိုက်တယ်။ နောက်တစ်ခါ Phone ပြန်ဝင်လာတော့ သူမ မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေ ပြည့်နေပြီ။ အာရုံတွေ ထွေပါးလာပြီး စဉ်းစားရကြပ်နေတုန်း အချိန်မှာ သူမကားကို တစ်ခြားကားတစ်စီးက ဝင်တိုက်လိုက်တယ်။ ကစဉ့်ကလျားဖြစ်သွားတဲ့ သူမရဲ့ကားလေး လမ်းမပေါ်ကနေထိုးကျပြီး အမှောင်ထုထဲသို့မှောက်ကျသွားတယ်။ (10 Cloverfield Lane)
သူမ သတိရလာတော့ အခန်းကျဉ်းလေးတစ်ခုတည်းရဲ့အိပ်ယာလေးပေါ်မှာ ရောက်နေတယ်။ သူမ ဒဏ်ရာရရှိနေတဲ့ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ပတ်တီးစည်းထားပေမဲ့ ရုန်းဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါ သူမရဲ့ခြေထောက်ကို နံရံနဲ့ခြေထိပ်ခတ်ထားတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ သူမရဲ့မလှမ်းမကမ်းနားမှာ ရှိနေတဲ့ သူမရဲ့ပစ္စည်းတွေထဲက ဖုန်းကိုရအောင်ယူနိုင်ပေမဲ့ Signal မရှိသောကြောင့် မည်သူ့ကိုမှ အကူအညီခေါ်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့။ ထိုစဉ် သူမရဲ့ထိုအခန်းလေးကို သော့ခတ်ထားတဲ့ လေးလံသော သံတံခါးကြီး ပွင့်လာတော့ လူဝကြီးတစ်ယောက် ဝင်လာတယ်။ “ရှင် ကျွန်မကို ဘာလုပ်မှာလဲ?” လို့ မေးလိုက်တဲ့ သူမရဲ့မေးခွန်းကို ထိုလူဝကြီး ဖြေလိုက်တဲ့ အဖြေက “ငါ မင်းကို အသက်ရှင်အောင် ထားဖို့”တဲ့။ ထို့နောက် ထိုလူကြီးက ရှင်းပြတယ်။ အပြင်မှာ တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်တဲ့။ ကြီးမားတဲ့ တစ်ခုပဲတဲ့။ ဘယ်သူတွေလဲတော့ အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးတဲ့။ Chemical စစ်ပွဲ (ဒါမှမဟုတ်) Nuclear စစ်ပွဲကြီးတစ်ခု ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ အပြင်မှာ ရှိတဲ့ လူသားတွေအကုန်လုံးသေကုန်ကြပြီတဲ့။ အခု သူမရောက်ရှိနေတဲ့ နေရာက စစ်ပွဲတွေရဲ့ရန်ကို ရှောင်ပုန်းနေထိုင်ရန် တည်ဆောက်ထားသော Bunker တစ်လုံးပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ပြောပြတယ်။ အခန်းထဲက ထိုလူကြီးထွက်သွားတော့ သူ့နာမည်ကို လှမ်းပြောပြတယ်။ “Howard” တဲ့။
ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့3လ လောက်ကထိ ကျွန်တော်တို့ဘာမှ မသိခဲ့ရပေ။ January လလယ်လောက်က ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ Online မှာ 10 Cloverfield Lane ဆိုပြီး Trailer လေးတစ်ခု ပေါ်လာတယ်။ Cloverfield ဆိုတဲ့ နာမည်ပါနေတော့ ပထမဆုံးထင်လိုက်တာက 2008 လောက်ကထွက်ခဲ့တဲ့ Director Matt Reeves ရဲ့Cloverfield ဆိုတဲ့ Found Footage Style ဂြိုလ်သားကားရဲ့အဆက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်လိုက်မိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ထုတ်လုပ်သူ J. J. Abrams နဲ့ Director Matt Reeves တို့က ထိုဇာတ်ကားရဲ့Sequel ကို ရိုက်ကူးမယ်လို့ပြောလာခဲ့တာ ကြာပြီလေ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်လောက်မှာတော့ ထို sequel အကြောင်းလူပြောနည်းသွားပြီး လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနယ်ပယ်ကနေ တိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။ (လွန်ခဲ့တဲ့2လခန့်လောက်အထိပေါ့။) ဒါဟာ အမှန်တော့ ကျွန်တော်တို့သတိမထားမိတဲ့ ရုပ်ရှင်ပညာရဲ့ လှည့်ကွက်တစ်ခုပဲ။
နောက်တစ်ခု ထပ်မေးပါရစေ။ Director Dan Trachtenberg ဆိုတာ ကြားဖူးလားလို့။ ကျွန်တော်လည်း အမှန်တိုင်းပဲ ဖြေပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တစ်ခါမှ မကြားဖူးပါဘူး။ ဘယ်ကြားဖူးပါ့မလဲ? ဒီဇာတ်ကားဟာ သူ့ရဲ့ပထမဆုံး Director အဖြစ် ရိုက်ကူးတဲ့ ဇာတ်ကားလေ။ ထူးခြားတာတွေက ဇာတ်ကားတစ်ကားမှာ ဇာတ်ကောင်တွေနည်းလေး ပိုပြီး ကောင်းအောင်ရိုက်ကူးနိုင်လေပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေ 2000s ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းရဲ့First Time Directors တွေကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Duncan Jones ရဲ့Moon, Rian Johnson ရဲ့Brick, Colin Trevorrow ရဲ့Safety Not Guaranteed, Gareth Edwards ရဲ့Monsters, Josh Trank ရဲ့Chronicle, Alex Garland ရဲ့Ex Machina တို့ကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် first time directors တွေ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေဟာ အလွန်ကို ကောင်းမွန်နေခဲ့တာကို အသိသာကြီးတွေ့နိုင်တယ်။ ထိုကဲ့သို့ပဲ ယခုဇာတ်ကားက director သည်လည်း သူ့ရဲ့ပထမဆုံး ဇာတ်ကားကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာကို တွေ့ရတယ်။
10 Cloverfield Lane သည် small movie ဆိုသည့်အတိုင်း ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်အရေအတွက်ကလည်း3ယောက်ပဲရှိတယ်။ Howard ရယ် Michelle ရယ် Emmett ရယ် (Emmett ဆိုတာက ထို Bunker ထဲမှာ ရှိတဲ့ တတိယဇာတ်ကောင်)။ Howard နဲ့ Michelle ရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေဟာ အဓိကဇာတ်ကောင်တွေဆိုရင် Emmett သည် သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ကြားထဲမှာ ရှိတဲ့ ထိုဇာတ်ကောင် နှစ်ယောက်ကို ဆက်စပ်ပေးသော ဇာတ်ကောင်ပင်ဖြစ်တယ်။ Howard အဖြစ် John Goodman က တစ်သက်တာ အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရလောက်အောင် သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Michelle အဖြစ်ကတော့ Mary Elizabeth Winstead နဲ့ Emmett အဖြစ် Short Term 12 ထဲက John Gallagher Jr. က သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ John Goodman ကြီး အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်နေပေမဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ မော်တော်ကားတစ်စီးဆိုရင် ကားမောင်းတဲ့သူဟာ Mary Elizabeth Winstead ပဲ။ သူမကို ယခုလို ဇာတ်ကောင်မျို းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ Remake “The Thing” မှာမြင်ခဲ့ဖူးပြီဆိုတော့ ယခုဇာတ်ကားဟာ ဒုတိယအကြိမ် Mary Elizabeth Winstead ရဲ့သည်းထိပ်ရင်ဖို ဇာတ်ကောင်ပါပဲ။ သူမရဲ့မျက်လုံးတွေမှာ မည်သည့်အခွင့်အရေးပင်ဖြစ်စေ ရရင် ရသလို ယူမယ်လို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အရိပ်အယောင်တွေကို အမြဲတစေလို တွေ့မြင်ရတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဒီဇာတ်ကားဟာလည်း သူမရဲ့Journey အမြင်နဲ့ပဲရိုက်ကူးထားတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းထိုကဲ့သို့သော ဇာတ်ကားတွေ ပိုမိုများပြားလာသလိုပဲ။ အခွင့်အရေးကို ရရင် ရသလိုအမြဲယူမယ်လို့ကြံစည်နေတဲ့သူမ တစ်ကယ်လည်း အခွင့်အရေးတွေရတိုင်း ယူခဲ့ပါတယ်။ အောင်မြင်ခဲ့လား ကျဆုံးခဲ့လားဆိုတာကိုတော့ စာဖတ်သူတို့ပဲ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်စေချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီဇာတ်ကားအကြောင်း နည်းနည်းပဲသိလေလေ ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်တဲ့အခါ ဒီဇာတ်ကား မည်မျှလောက် ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာ သိစေချင်လို့ပါ။
ဒီရုပ်ရှင်ဖြစ်လာတဲ့ အကြောင်းလေးကို နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ 2008 လောက်က ထွက်ခဲ့တဲ့ Cloverfield ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို သိတဲ့အချို့တော့ မှတ်မိလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ Found Footage Style ပုံစံမျို းနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့n ဂြိုလ်သားလိုလို Monsters ကောင်တွေ America ကို ရောက်လာတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ။ ထိုဇာတ်ကားရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့် နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားရိုက်ကူးမယ်လို့စီစဉ်ထားခဲ့ကြပေမဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ 2012 လောက်က ထင်တယ်။ Josh Campbell နဲ့ Matt Stuecken ဆိုတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ နှစ်ယောက် ရေးသားခဲ့တဲ့ The Cellar ဆိုတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းလေးကို J.J. Abrams ရဲ့ Bad Robot Productions က ဝယ်ယူခဲ့ပြီး Damien Chazelle ဆိုတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာကို ပြန်လည် ရေးသားခိုင်းခဲ့တယ်။ (Damien Chazelle ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်လောက်က နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ Whiplash ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ဇာတ်ညွှန်းရေးသားခဲ့တဲ့သူလေ။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ဒီဇာတ်ကားမှာ Whiplash လို Suspense ဆန်ဆန် အငွေ့အသက်လေးတွေ တစ်ဝကြီး ရှုရှိုက်ခဲ့ရတာပေါ့။) ဒီအချိန်မှာ သူတို့ဘာသွားတွေ့ကြလဲဆိုတော့ ဒီဇာတ်ညွှန်းဟာ J.J. Abrams ပဲထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Cloverfield နဲ့ ဆင်တူတယ်ဆိုတာ တွေ့ ခဲ့ကြတယ်။ J.J. Abrams ကို ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးတော့ same fictional universe မှာ ရှိနေတာ မဟုတ်နိုင်သလို Sequel လည်း မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဒါပေမဲ့ “blood relative” (သို့မဟုတ်) “spiritual successor.” လို့တော့ ပြောလို့ရတယ်တဲ့။ သူ့ဘာသာ ဘာပဲပြောပြောပါ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ 10 Cloverfield Lane သည် Cloverfield ထက် အဆပေါင်းထောင်သောင်းမက ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အသွေးပြည့်မှီတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲ။
ဒီရုပ်ရှင်ကို ကြည့်နေရင်းနဲ့ပရိသတ်တစ်ချို့က ခန့်မှန်းရလွယ်တယ်လို့ပြောကောင်းပြောမိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သေချာတာက ခန့်မှန်းရ လွယ်ကူနေတာတောင် တစ်ချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေဟာ ပရိသတ်ရဲ့အသက်ရှုသံတွေကို မှားမိစေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး ပြန်လာတဲ့ ကျွန်တော်ဆိုရင် လက်တွေတုန်နေတာလေ။ ကြောက်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားခဲ့လွန်းလို့။ ဇာတ်လမ်းရဲ့စစချင်း မိနစ်တွေကနေ နောက်ဆုံး မိနစ်တွေအထိ ပရိသတ်စွဲဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကို ခန့်မှန်းလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့အလှည့်အပြောင်းတွေ ဒေါသတွေ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ အလွန်ကို ခန့်မှန်းရ ခက်စေလွန်းတယ်။
ရုပ်ရှင်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတဲ့ ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ နာမည်က Megan တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ထို Megan ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ကပဲ ဇာတ်လမ်းရဲ့ဝှက်ဖဲတွေကို ဖော်ထုတ်ပေးနိင်ခဲ့တယ်။ အခုလို ဇာတ်လမ်းမှာ မမြင်ရတဲ့ ဇာတ်ကောင်တဟ်ယောက်က ဇာတ်လမ်းရဲ့ဝှက်ဖဲကို ဖော်ပြနိုင်ခြင်းဟာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကြောင်းပြောတဲ့ နေရာမှာ ခက်ခဲလွန်းတာကို ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေ သိကြမှာပါ။ ထို့အပြင် ဒီဇာတ်ကားရဲ့ဇာတ်ကြောင်းပြောပုံက အခြေအနေတွေနဲ့ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေ တင်းကြပ်လာပုံကို ဘာနဲ့ဥပမာပေးရမလဲဆိုရင် Screw ရစ်သလိုပဲလို့ဥပမာပေးရမလိုပဲ။ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုရစ်လာလေ ပိုမိုတင်းကြပ်လာလေလေနဲ့နောက်ဆုံးမှာ အတင်းကြပ်ဆုံး နေရာအဆုံးတစ်ခုကို ရောက်ရှိလာတော့တာပဲ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကမ္ဘာပျက်ခြင်းဟာ အပြင်လောကမှာဖြစ်ပျက်နေတယ်လို့မခံစားခဲ့ရပဲ ထို Bunker လေးထဲမှာပဲ ထိုလူ3ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာလာပုံဟာ ကမ္ဘာပျက်ခြင်းပဲဆိုတဲ့ ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကို ပေးစေခဲ့တာပါ။ ဇာတ်ကောင်3ယောက်က စားပွဲတစ်ခုမှာ ဖဲကစားနေကြတယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်ယောက်ဆီမှာတော့ ဝှက်ဖဲတစ်ချပ်ရှိနေခဲ့တယ်။
ကျွန်တော့်ကို လူတစ်ယောက်က မင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံး Movie Genre ကိုပြောပါဆိုရင် Sci-fi thriller ပဲ။ 10 Cloverfield Lane က sci-fi နည်းနည်းနဲ့Thrilling ကိုတော့ ဒီဂရီအမြင့်ဆုံးထိ ရောက်အောင်မြှင့်ပေးခဲ့တယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါမယ်။ 10 Cloverfield Lane သည် 2016 အတွက် ကျွန်တော် ကြည့်ဖူးသမျှဇာတ်ကားတွေထဲတင် အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားတစ်ကားပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဇာတ်ကားရဲ့အစကနေပြီး နောက်ဆုံးခန်းအထိ ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ကူးတွေထဲမှာ မေးမြန်းနေမဲ့ မေးခွန်းတွေကတော့ ..
Howard သည် Michelle ကို လိမ်လည် လှည့်ဖြားခေါ်ဆောင် ဖမ်းဆီးထားတာလား?
တတိယဇာတ်ကောင်ဖြစ်သူ Emmett ကရော ယုံကြည်ရမဲ့သူလား? Howard ရဲ့အပေါင်းအပါလား?
Howard ရဲ့အတိတ်တွေမှာ ဘာတွေ ရှိခဲ့သလဲ? သူသည် မည်ကဲ့သို့သော လူတစ်ယောက်နည်း?
ဒါမှမဟုတ် … သူတို့အမှန်တွေပဲ ပြောနေတာလား?
အပြင်မှာ တစ်ကယ်ပဲ ကြီးမားတဲ့ စစ်ပွဲကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီး လူသားတွေ သေဆုံးသွားကုန်ကြပြီလား?
ဒါမှမဟုတ် .. အဆိုးဆုံးက ထိုမေးခွန်းတွေ အကုန်လုံးက အမှန်တွေပဲလား?
ထို့အပြင် ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းခဲ့သည်မှာ Cloverfield ရဲ့ အဆက်လား?
အဆက်မဟုတ်ရင် 10 Cloverfield Lane ဆိုတဲ့ နာမည်က ဘာလဲ?
ထိုအဖြေတွေကို ယခု စာဖတ်သူသိချင်နေပါသလား? ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း မဖြေပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် စောစောက အထက်မှာ ပြောထားတဲ့အတိုင်း ဒီဇာတ်ကားအကြောင်း မသိလေ၊ ဒီဇာတ်ကားက ပိုကောင်းလေပဲဆိုတာပဲ။ အဲ့ဒီ့တော့ တစ်ခြားလူတစ်ယောက်က သင့်ကို Spoil မလုပ်ခင် အခွင့်အရေးရရင် အမြန်ဆုံး ကြည့်စေချင်တယ်လို့ပဲ ပြောလိုက်ပါရစေတော့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီဇတ်ကားက ပေးတဲ့ “Mystery Box” ကို သင်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖွင့်လိုက်စေချင်လို့ပဲဗျာ။
ဒီဇာတ်ကားကြည့်ပြီး Poster မှာရေးထားတဲ့ စာသားလေးဟာ အလွန်မှန်တယ်ဆိုတာ သိခဲ့ရတယ်။ “Monsters come in many forms.” ဆိုတာပဲ။ အပြင်လူ့လောကမှာလည်း တစ်ကယ်တော့ Monsters တွေဟာ ပုံစံအဆင်သဏ္ဍာန်မျို းစုံနဲ့ကျွန်တော့်တို့ဘဝတွေကို လာရောက်တတ်ကြတယ်လေ။
“People are strange creatures. You can't always convince them that safety is in their best interest.”
Photo reference: 10 Cloverfield Lane's Official Facebook Post